UZuma akayogeza igama lakhe enkantolo uma emsulwa – Maimane – LIVE Express
I-Democratic Alliance (DA) isisamukele isinqumo esikhishwe yi-Supreme Court of Appeal (SCA) ngoLwesihlanu ekuseni nalapho ichithe khona isicelo sikaMengameli Jacob Zuma kanye ne-National Prosecuting Authority (NPA) sokudlulisa isinqumo seNkantolo eNkulu mayelanana noxhaxha lwamacala ayebhekene noMengameli Jacob Zuma.
FUNDA NALOLU DABA: I-ANC ithi isafunda isinqumo senkantolo ngokuchithwa kolwama-spy tapes
“Isinqumo sanamhlanje siwukunqoba kwezobulungiswa, ukusebenza komthetho kanye neNingizimu Afrika. UJacob Zuma angeke aphule ingalo yomthetho. Umthetho usebenza kuwo wonke umuntu, ngale kokuthi ubani,” kusho umholi we-DA, uMmusi Maimane.
Manje uMaimane uthi usezobhalela iNhloko ye-NPA, u-Adv Shaun Abrahams, emnxusa ukuba anikeze uZuma amaphepha amazisa ukuthi kumele avele enkantolo ngokushesha mayelana namacala angu-783 enkohlakalo kanye nokukhwabanisa ayebhekene noZuma ngaphambi kokuba abe nguMengameli.
“Uma ngabe uMengameli emsulwa, njengoba esho kanjalo, kumele avumele icala lasenkantolo linqume ngokuba msulwa kwakhe,” kusho uMaimane egcizelela ngokuthi uZuma kuyabonakala ukuthi uyazi ukuthi kuningi okumele akuphendule.